कांग्रेसको अनुशासन समितिले उच्च तहका नेतालाई पनि कारबाही गर्ला ? « News24 : Premium News Channel
कांग्रेसको अनुशासन समितिले उच्च तहका नेतालाई पनि कारबाही गर्ला ?
काठमाडौं । पार्टीको हित विपरित काम गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ हजार २ सयभन्दा वढी नेता/कार्यकर्ताविरुद्ध उजुरी परेको छ । पहिलो चरणमा समितिले उजुरी परेकामध्ये तल्लो तहका करिब दुई सय जनालाई कारबाही गरेको छ । तर, उपल्लो तहका उजुरीबारे निर्णय लिन भने समितिलाई सकस परेको छ ।
करिब १२ सय जनाविरुद्ध उजुरी बुझेको अनुशासन समितिले मंगलबार २०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा वागी उमेदवारी दिएका करिब २ सय नेता÷कार्यकर्तालाई कारबाहीको निर्णय ग-यो ।
नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा ४ (क) बमोजिम कारबाहीमा परेकामध्ये केहीले फरक निर्वाचन जितेका छन् भने अधिकांश कांग्रेसमा सक्रिय छैनन् । उजुरीकर्ताले भने चुनाव केन्द्रित मात्र नभइ पार्टीको नीति र निर्णयविरुद्ध काम गर्ने माथिल्लो तहका नेतालाई पनि कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन् ।
कारबाहीको सूची सार्वजनिक भए लगत्तै उच्च नेतृत्वलाई बचाउन खोजिएको भन्दै अनुशासन समिति आलोचनाको शिकार भइरहेको छ । पार्टी नेतृत्वसहित उच्च तहका नेताविरुद्धको उजुरीमा अध्ययन भइरहेको जनाएको समितिले क्रमशः सबैविरुद्धका उजुरी छानविन गरेर दोषको मात्रा अनुसार कारबाही गरिने जनाएको छ ।
कार्यकर्ता तहमा कार्वाही सुरु गरेको अनुशासन समितिले उच्च तहका नेतालाई पनि कारवाही गर्ला त ? भन्ने प्रश्न कांग्रेसभित्र उठ्न थालेको छ । गुटका आधारमा बनाइएको समितिले निश्पक्ष छानविन गरेर दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गर्छ भन्नेमा न उजुरीकर्ता विश्वस्त छन्, न कार्यकर्ता । तर, समिति भने अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गर्छ ।
आर्सनलका मुख्य प्रशिक्षक मिकेल अर्टेटा कोरोना मुक्त
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि प्रदेश १ सरकारले १० करोडको कोष खडा गर्ने
विराटनगरमा अलपत्र परेका ३९ जनालाई लेटाङ क्वारेन्टाइनमा लगिदै
इनरुवाबाट धरान रेफर गरिएका बिरामी ‘अवस्था सामान्य’ भन्दै घर फर्काइए
access_time 7:06 pm
एजेन्सी, ११ चैत। इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लब आर्सनलका मुख्य प्रशिक्षक मिकेल अर्टेटा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट
तारा आचार्य, विराटनगर, ११ चैत । प्रदेश नं. १ सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका
तारा आचार्य, विराटनगर, ११ चैत । विराटनगरमा अलपत्र परेका ३९ जना नेपालीहरुलाई मोरङको लेटाङस्थित क्वारेन्टाइनमा